Tijaabinta iyo dhaleeceynta gvSIG 1.9 - Geofumadas
Tijaabinta iyo dhaleeceynta gvSIG 1.9
Disember, 2008 GvSIG, tabo cusub
Dhawaan ayey ahayd ku dhawaaqay 1.9 version of gvSIG ee version alpha, ka dib markii la tijaabiyo waxaan go'aansaday inaan ka tago riyooyin qaar ka hor inta aysan iloobin:
Es suurtagal in la soo dejiyo labaduba waa version shuruud ah, oo miisaamaya 103 MB ee Windows iyo 116 MB ee Linux. Tani waa bedel wanaagsan haddii aadan haysanin qalabka 1.3, haddii aad haysato rakibaad shaqeyn ah waxaad soo dejisan kartaa qaybta iyada oo aan loo baahnayn shuruudaha ka socda 80MB.
1.9 version of code waxaa sidoo kale la heli karaa.
Waxaan soo dejiyey nuqulka iyada oo aan shuruudaha looga baahan yahay, waxaana igu dhacay aniga oo ii rakibaya fariin:
java.io.FileNotFoundException: C: Dukumiintiyo iyo habeyn ...
Sida cad waxay taasi dhacdaa sababtoo ah guryaha qaarkood waa in loo qoondeeyey Java, kuwani waxay ka noqon karaan xuquuqda saxeexa kaarka dhimashada, si aan u sii adkeynin si ka wanaagsan inaanan uninstall qaybaha hadda jira. Markaa markaan kormeerka mar labaad waxaan kaa codsanayaa inaad hubisid haddii aad u baahan tahay shuruudo iyo in lagu rakibo nooca Java ku habboon ... ka dibna wax walba si haboon ayuu u socdaa.
Markaad ku rakibtey, ma aanan abuurin astaanta miiska, ama bilawga bilawga (inkastoo aan u malaynayo inaad i waydiisay haddii aan doonayo, aniguna waxaan idhi), sidaas darteed waa inaan abuuro gaaban halkaasoo lagu rakibay.
C: Barnaamijyada FilesgvSIG_1.9_alphabingvsig.exe
Tan, "nuqul" ayaa loo sameeyaa feyl, ka dibna "dhajin gaagaaban"
Markii uu furay mashruucii hore, wuxuu ii soo diray farriin khasaare ah, taas oo sababtay nooca qiyaasta ... laakiin uma maleynayo inay tahay qalad joogto ah.
Isku duwidda baadi hawlgalka: + proj = tmerc + lat_0 = 0.0 + lon_0 = -3.0 + k = x_0.9996 0 + = 500000.0 + = 0 + y_0.0 ellps = intl = m + unugyada in + proj = tmerc + lat_0 = 0.0 + lon_0 = - 87.0 + k = x_0.9996 0 + = 500000.0 + = 0 + y_0.0 ellps = WGS84 + Datum WGS84 = = m + unugyada:
Waxaan sidoo kale u maleynayaa in hadda ay isticmaalayso khayraad badan, geeddi-socodku waxa uu dareensan yahay in uu yara yareeyo, markaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay sii wanaajin doonaan arimaha dhismaha ... waana inay tixgeliyaan.
Waxaan u maleyn karnaa in nuqulkani uu bixin doono badi, sababtoo ah waxqabadyo dheeraad ah ayaa la isku darayaa waxoogaa yar waxayna qaadataa qaan gaar ah.
Waxaa la fahamsan yahay in tani ay tahay version tijaabo ah, iyo ugu dhakhsaha badan aannu yeelan doono version deggan gvSIG 2, ka dibna ay la xalin shaki soo socda in liiska waraaqaha ay ku ... kadis ah, qaar ka mid ah banality fudud sida qof waxaa meel khaldan.
Waxaa ka mid ah sifooyinka ugu wanaagsan, ee aan horay u soo sheegnay ka hor, waa ku-soo-biirinta sharaxaad ku jirta hal guji. Halkan waxaa jira waxyaabo badan, laga bilaabo raajada ilaa isbedelka xogta vector illaa falanqaynta hydrological.
Hase yeeshe tan kale waa sidan:
-Injinta TIN si loo abuuro makiinada xagal u ah ... Waxaan u maleynayaa inaad shaqeyn kartid heerarka heerarka (... falanqaynta 3D)
Qalabka falanqaynta shabakada (... falanqaynta nertwork)
Qalabyada si loogu badalo raajada si loo hirgeliyo (... scan scan)
Ka mid noqoshada topolojiga
... iyo kuwo kale oo badan, kuwaas oo aan ku yeelan doonnaa wakhti aan ku hadalno
Muuqaal ... wax badan oo la sameeyo
Waa hormar wanaagsan wixii ay qabteen, laakiin gaar ahaan waxaan u maleynayaa in koorsada iconography ay u fiicnaan laheyd naqshadeeyayaasha garaafyada maxaa yeelay waa inaan xasuusano inay yihiin "astaamo" sidaa darteedna ay tahay inay wax kallifaan, sii wadida nadiifinta sawirrada iyo aqoonsiga shirkadeed.
Si loo sameeyo astaamo waxay u baahan tahay shuruudo ka baxsan sameynta sawirro aad u adag oo ku yaal Corel Draw ka dibna adeegsanaya Gimp si loogu beddelo 64 × 64 tirooyin. Adeegsiga hadhka, iftiinka iyo darajooyinka waa in wax laga weydiiyaa badhamada oo kaliya waa in ay dhagsadaan, sahlanaato waqti dheeri ah oo ay waqti geliyaan astaamaha "on mouse over" waxay noqon kartaa sharad wanaagsan.
Waxaan ku adkaynayaa, maahan in naqshadeeyuhu u muuqdo mid weyn oo leh farshaxanno waaweyn oo farshaxanimo ah oo loo rogay figrado, waa inaan gartaa inyar in yar oo aan soo heysanay awood muuqaalo wanaagsan tan iyo intii kuwa farshaxanimada leh ee lagu abuuray burushka rinjiga ee 8x laakiin waa inaanan lagu xadgudbin oo aan qalloocin fikirka asalka ah ee "icon"
Waa diyaarad, maya, shimbir, maya; waa ... khadka taliska
... j *, sida aanan u malayn karin ... haddii ay u muuqato ... waxay u muuqataa ... maxay u egtahay?
Qoraal, taangiyo dagaal ... ku fashilmay, waa taariikhda
waxa dhacay ... umana arkaan waxa u eg calaamada microfilming ee lagu kaydiyay gudaha cryptographer.
Guud ahaan, calaamadaha muuqda waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo madow, oo leh geeso qotodheer oo adag oo aan laheyn mid isku mid ah, fiiri quraafka marka loo eego waxyaalaha kale ee abuurista. Looma maleyneynin sida ay u eegi doonaan shaashadda leh qiyaasta sarreeya sidaas daraadeed ayaa loo isticmaali karaa size yar.
Waxa jira wakhtiyo ay habboon tahay in lala ekaado heshiisyada la aqbalay, sida "dib-u-noqoshada" iyo "redo" intii aad samayn lahayd fallaadhahaas badhanka ah ... * xtrax, iyo leh xuduud oranji ...
Like horumarinta computer ka, functionalities waxaa lagu daray in ay design guud, iconography waa in ay tixgeliyaan aqoonsiga ... haddii aan, waxa ay eegi doonaa sida geedka kirismaska ​​ah oo uu soo laalaadeen figurines aan shuruudaha aasaasiga ah sida wada noolaanshaha, dhabanada ama dhaqdhaqaaqa.
Laakiin welwel, soo dhaweyntu waa wax walba oo wanaagsan ee nuqulkan ku ballanqaaday.
Post Previous«Previous AutoCAD 3D mashaariicda horumarinta
Post Next Ku saabsan irridahaNext »
7 Jawaabo "Baaritaanka iyo ku dhaleeceynta gvSIG 1.9"
Ma ogi, ma heysto ubuntu, laakiin waxaan u maleynayaa inay tilmaameyso waxa aan ku sameyno daaqadaha marka la samaynayo mawduucyo gaar ah daaqadaha.
sidee baan u saameeynayaa saameynta graphic ????
noriberto isagu wuxuu leeyahay:
Gostaria si aad u ogaatid sida loola xiriiro gypsig (gawaarida AutoCAD ma jirto amar qeexan).
Dhibaato isku mid ah ayaan lahaa Luis iyo ka dib markii ay diiddo dhammaan saameynta garaafka ay u shaqeyso.
Luis Puente isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku rakibay version 1.1.2 (laga bilaabo 1.1 oo ka sii dheer) iyo sidoo kale 1.9 on Ubuntu 9.1 Karmic iyo waxyaalahaani waxay dhacaan uun:
1. Soo-saareha kama shaqeeyo desktop-ka ama ma abuuro.
2 Daaqadaha ma cabirayaan sidaa daraadeed xitaa macaamiisha mashruuca ayaa la soo bandhigi karaa.
3 Waxaa jira daaqado oo tusaya kaliya widget iyo wax ka mid ah maadada.
Maxaa noqon doona iyo sidee loo xalliyaa?
PS Waxaan ku adeegsanayaa COMPIZ qaabka garaafka.
Waad ku mahadsantihiin inaad joojisid halkan oo aad ku jirtid maalin macquul ah ... mar walba ma fiicna.
Waanu ka warhayn doonaa hagaajinta nidaamka iyo sida ugu dhakhsaha badan ee aan u fidineyno, maxaa yeelay waxay hubaal noqon doontaa qalab qiimo leh maadaama isticmaalka la faafiyo.
: p sorry for the sarcasm.
Waxan ka fiirsanaynaa dhamaan faallooyinkaaga, waxaana rajeyneynaa in aan horumarino dhinacyadaas. Dabcan waa mid ka mid ah dhinacyada ay mashruucu hoos u dhacdey, sababtuna waa koox shaqeynaya, oo ka mid ah mashruuca, si loo barto isticmaalka iyo qaabka codsiga.
Qaar ka mid ah waxyaalihii aad xusuusnayd waxay leeyihiin sababtooda inay noqoto, tusaale ahaan nambarka taliska ayaa ah mid caadi ah, dhab ahaantii waa kan loo isticmaalo gnome / ubuntu si loo bilaabo gawaarida. Waxyaabaha kale, sida kuwa aan isku midka ahayn ee calaamadaha, waa in la isku daro kuwa cusub kuwa horay loo soo dhejiyo - markaa waa in aan saxno mustaqbalka-, iwm.
Waad ku mahadsantahay inaad isku daydo alaab cusub oo aad ka faalloonto saameyntaada!